Amin'ny firoboroboan'ny toekarena haingana, ny olona dia miahiahy bebe kokoa amin'ny fampanan-karena ny fiainam-panahiny, ny fahitalavitra kely sy ny LCD tsy afaka manome izay ilainy intsony. Hetsika sy hetsika fialamboly maro no voalamina isan'andro, toy ny klioban'ny DJ, fety, kaonseritra, hetsika fihaonambe. Fampisehoana lehibe tarihin'ny fanofana lehibe no mahatonga ny fihetsiketsehana sy ny fisehoan-javatra mamirapiratra miaraka amin'ny vokatr'ilay sarimihetsika mazava loko, famirapiratana avo, endrika fijery mivelatra, fomba fijery mivantana misy. Ny fifantohana MPLED amin'ny fanomezana fanofana an-trano / an-kalamanjana avo lenta naseho fampiratiana avy amin'ny P3 ka hatramin'ny P10 ho an'ny mpanjifa amin'ny indostrian'ny haino aman-jery sy fialamboly, dia nahavita tetikasa mahomby maro eran'izao tontolo izao.
· Fampisehoana vokatra
1. Mba hanehoana sary mazava sy mazava miaraka amina vahaolana avo.
2. Ny fanamiana tsara amin'ny loko dia mamaha tsara ny olan'ny mozika.
3. Ny haitao mandroso amin'ny famokarana dia miantoka ny kalitao sy ny androm-piainan'ny rindrin'ny horonantsary LED.
4. Ny rindrina video LED dia mampiasa rindrambaiko milalao horonantsary malaza hanamorana ny fiasan'ny rafitra.
5. Mora ho an'ny fikojakojana, ary afaka manamboatra ny teboka tokana mba hamonjy ny vidin'ny fikolokoloana.
6. Misy vokany tsara amin'ny fampisehoana na amin'ny sary na amin'ny litera satria mampiasa teknolojia tena pixel
Miaraka amin'ny jiro LED manjelanjelatra sy akorandriaka avo lenta.
Mora apetraka ary esorina
Fikolokoloana jiro tokana
LED mitondra fiara miaraka amin'ny maody ankehitriny tsy miova, fanazavana fanamiana, ary fanjifana herinaratra ambany
Ny haavon'ny pixel dia 3mm, izay manana 64 * 64 teboka. Ny pixel tsirairay dia misy 1R1G1B.
Ny takelaka LED elektronika LED P3 feno loko dia misy amin'ny endrika maro: endrika mahitsizoro, toradroa, miolakolaka, boribory ary endrika hafa.
Ny takelaka elektronika LED P3 feno loko dia afaka manohana karatra fanaraha-maso sy karatra fanaraha-maso tsy mifanaraka amin'ny fotoana iray; na eo amin'ny tsy fahombiazan'ny solosaina fanaraha-maso aza dia mbola afaka mampiseho ara-dalàna.
Fametrahana ny firafitry ny vy: ny fisehoana miloko P3 LED feno loko dia fefy vy maivana, lovia vy rivet bolt rivet no ampiasaina ho toy ny rafitra fanohanana ao amin'ilay faritra andry sy tsanganana mifanitsy aminy, ary ny fefy vy aseho dia mifandray amin'ny vy rivet raikitra lovia.
Ny rafitra P3 LED ao anaty rafitra lamba feno loko milamina sy azo ianteherana, manana fahaiza-manao fanoherana mahery vaika ary miasa tsy tapaka mandritra ny 72 ora. Ny rindranasa fikirakirana rafi-pandaminana dia mora-miasa ary mora ampiasaina.